अलविदा ! म्याराडाेना « LiveMandu
अलविदा ! म्याराडाेना
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०५:१२
नेपाल कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने पहिलो मुलुक हुनेछः
भट्टराईलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने- चुनाव जितेपछि मन्त्री
चीनमा कोरोना संक्रमण तीव्ररुपमा बढ्न थालेपछि ११ सहरमा
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल भएका १७ मुद्दाहरु
काठमाडौं । फुटबल लिजेन्ड डिएगो म्याराडोनाको हृदयघातका कारण ६० वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको छ । बेलायती पत्रिका द सनले अर्जेन्टिनी समाचारपत्र क्लारिनलाई उदृत गर्दै अर्जेन्टिनी फुटबलर म्याराडोनाको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ ।
पूर्व अर्जेन्टिनी आक्रामक मिडफिल्डर तथा प्रशिक्षक म्याराडोनाको घरमै रहेका बेला हृदयघातका कारण निधन भएको हो । उनको मष्तिष्कमा रक्तश्राव भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । तर, म्याराडोनाको परिवारबाट भने मृत्युको पुष्टि हुन बाँकी रहेको दी सनले जनाएको छ । म्याराडोना नेतृत्वको टोलीले सन् १९८६ मा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप जिताएका थिए ।
त्यतिबेला उनले इङ्ग्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा गरेको महत्त्वपूर्ण गोल विवादित बनेको थियो । उनको यसअघि मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो । म्याराडोनाको मस्तिष्कमा रक्तस्राव भएको आशङ्कामा नोभेम्बर महिनाको सुरुतिर शल्यक्रिया गरिएको थियो । सन् १९९७ मा खेल जीवनबाट सन्न्यास लिएपछि म्याराडोनाले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या खेप्नुपरेको थियो । आफ्नो फुटबल क्लब करिअरमा उनले बार्सिलोना र नेपोलीबाट खेले। नेपोलीबाट उनले दुई सिरी एको उपाधि समेत जितेका थिए । सन् १९६० अक्टोबर ३०मा उनको जन्म भएको थियो ।
म्याराडोनाले अर्जेन्टिनाका लागि ९१ खेल खेल्दै ३४ गोल गरेका छन। अर्जेन्टिनाबाट उनले चारवटा विश्वकप खेलेका थिए । सन् १९९० को विश्वकपमा पनि अर्जेन्टिनालाई उनले फाइनलसम्म पुर्याएका थिए। तर उक्त विश्वकपमा तत्कालिन वेष्ट जर्मनीसँग फाइनलमा पराजित हुँदै अर्जेन्टिना लगातार दोस्रो पटक विश्वकप जित्न चुक्यो ।
फुटबल जीवनको दोस्रो हाफमा भने म्याराडोना लागुऔषध प्रयोग गर्न थालेका थिए। १९९१ मा उनलाई लागुऔषध प्रयोग गरेकै कारण १५ महिना प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उनले ३७ वर्षको उमेरमा १९९७ मा व्यवसायिक फुटबलबाट सन्न्यास घोषणा गरेका हुन् । २००८ मा म्याराडोना अर्जेन्टिनी टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। तर २०१० को विश्वकप पछि भने उनले उक्त पद छाडे । अर्जेन्टिना उक्त विश्वकपको क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेको थियो ।
पाकिस्तानविरुद्ध काश्‍मीरमा बृहत प्रदर्शन, पाकिस्तानको अधिनमा काश्‍मीर हुननसक्ने माग
काश्‍मीर । पाकिस्तानविरुद्ध पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा बृहत प्रदर्शन गरिएको छ । पाकिस्तान सरकारले गरेको मानवअधिकार उल्लंघन र गलत व्यवहार र
Covid-19 has sure affected the whole world, from business to education sector to our day to day lives in general.
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै जिल्ला, जनसंगठन र तहका कमिटीहरु तत्काल पुनः
खोपको लाइन नमिच्न डब्लुएचओको धनी देशहरूलाई आग्रह
बीबीसी। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुखले देशहरूलाई आफ्ना निम्ति कोभिड-१९ खोपको जोहो गर्नका लागि लाइन नमिच्न आग्रह गरेका छन्। टेड्रोस एडहानोम